Praiminisitra Ntsay Christian: “Mila mahay mifampihaino isika Malagasy” | NewsMada
“Tsotra ny zava-dehibe ao anatin’izy io: tsy maintsy mahay mifampihaino isika samy Malagasy. Be dia be ny vondrona politika na antoko politika no miteny fa misy zavatra tokony hohatsaraina amin’ny fikarakarana ny fifidianana.”
Io ny valin-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Tsimbazaza, omaly, momba ny fanatanterahana ny fifidianana ben’ny Tanàna. Ao anatin’izay fikarakarana fifidianana izay ny lisitry ny mpifidy. Tsy maintsy mijery sy mandanjalanja ny amin’izany ny fitondram-panjakana.
Tsy tokony hohadinoina fa tapitra alohan’ny faran’ny taona ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna eto amintsika. Efa voalazan’ny filohan’ny Repoblika fa eo am-pandinihana izany ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao.
Tolo-dalàna ny momba ny satan’ny mpanohitra
“Tolo-dalàna ny momba ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana”, hoy izy momba ny handinihan’ny parlemanta ny lalàna momba izay. Noho izany, ireo solombavambahoaka ihany no mitondra izay. Ireo solombavambahoaka no mahita ny fanovana tian-dry zareo hatao amin’ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana. Efa nanome ny heviny momba azy ny governemanta, ny 7 aogositra lasa teo.
Rariny sy hitsiny ny fangatahan’ny filohan’ny Antenimierampirenena ny amin’ny tokony hanaovana antsipiriany ny fandaharanasan’ny governemanta amin’ny fanoloran’ny praiminisitra izany, araka ny nambarany. Mba hahazoan’ireo solombavambahoaka manara-maso ny fanatanterahana ny fandaharanasa amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) izany.
Efa niomana ho amin’izany ny governemanta, ka tsy misy olana ny momba an’izay. Izay no andrasan’ny rehetra. Na izany aza: “Tsy maintsy mitandrina kely ihany isika, sao lasa 5 na 6 ora ny hamelabelarana izany ka manahirana”, hoy izy.